Dagaalo xoogan oo goor dhoweyd ka qarxay Gobolka Galgaduud. | raascasayrmedia.com
← Burcadbadeedda Soomaalida oo sii-daaya shaqaale Hindi oo la socda markab u afduuban muddo sanad ku dhow
Shirwaynaha Beelaha Siwaaqroon ee Baargaal oo saacadaha inagu soo aadan furmaaya →
Dagaalo xoogan oo goor dhoweyd ka qarxay Gobolka Galgaduud.
Warar goor dhow na soo gaaray ayaa sheegaya in dagaalo xooga oo u dhaxeeya Ciidamada Culumaa’udiinka Ahlusuna Waljamaacah oo taageeraya Ciidamo Itoobiyaan, iyo Xoogaga Al-Shabaab ayaa ka qarxay deegaano ka tirsan Galgaduud.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalada ayaa ka socda deegaanka la yiraahdo God-Dhurwaa oo qiyaastii ilaa 20-KM dhanka bari ka xiga Magaalada Dhuusa Mareeb ee Xarunta Galgaduud.
Dagaalka oo ah kuwo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa ahaa dagaal maalmahan la sii saadaalinayay, kadib markii Ciidamo Itoobiyaan ah iyo Ciidamo kale oo Ahlusuna tababar loogu soo gaba gabeeyay gudaha Itoobiya ay soo galeen Gobolka Galgaduud.
Xiisadaha colaadeed ee ka jira Gobolada dalka iyo gulufka dagaal ayaa ah kuwo isku mid ah, oo qorshahooda ay wadaan Dowladda KMG, AMISOM iyo Ciidamada Itoobiya oo deegaanada xuduuda ah ka taageeraya kuwa Dowladda KMG iyo Ahlusuna.